Ndineengxaki malunga nenkolo ... Yintoni endiyenzayo?
Imibuzo malunga ne-Atheism kunye neNtsapho
Ndithandabuzo ngonqulo, kodwa intsapho yam iyazinikele kakhulu. Ndenze ntoni?
Ukubuza unqulo oye wakhula kunye nokuba intsapho yakho iyaqhubeka iyahambelana njani yinto enzima kakhulu ukujamelana nayo. Ukucinga ukuba unokushiya inkolo yentsapho yakho kunokuba nzima kakhulu. Nangona kunjalo, yinto eninzi abantu abaye bayayihamba ngayo ebomini babo kwaye bonke abantu abanokholo abanokholo kufuneka balungele ukwenza - inkolo engenakubuzwa okanye ibuyiselwe kwakhona ayikho inkolo efanelekileyo ukuzinikela, emva koko.
Inyaniso yokuba loo mbuzo iyimfuneko, akunjalo, yenza ukuba kube lula - ngakumbi ukuba unobutsha kwaye usaphila ekhaya nabazali bakho. Iintsapho ezininzi zinokuthi zithathe umbuzo onjalo, uvakalelwa kukuba uzinikezela ngandlela-thile kunye neempawu abazame ukukuphakamisa ngazo. Ngenxa yoko, kungenokuba bubulumko ukukhawuleza ngokukhawuleza kwihlabathi ukuba unokungabaza ngenkolo yakho.
Enyanisweni, isenzo esiphuthumayo ngokubanzi asibizelwa; Kunoko, into efunekayo yinkathalo, ingqwalasela kunye nokufunda. Kufuneka uthathe ixesha lokugxila ngokuchanekileyo oko kukubangela ukuba uqale ukungaqiniseki. Ngaba uyayifumana isiseko sembali yokuba unqulo lwakho lube ngumbuzo olungathandabuzekiyo? Ngaba ufumanisa into ebonakalayo yendalo yonke (njengokuba kukho intlungu, ukubandezeleka, nokubi ) ukungahambelani noluhlobo lwenkolo yakho lusekelwe kuyo?
Ngaba ubukho bezinye iicawa kunye nabalandeli abazinikeleyo benza ukuba uzibuze ukuba unokukholelwa njani ukuba iYakho Yona Inkolo Yenyaniso?
Kukho izizathu ezininzi ezenza ukuba umntu aqale ukungaqiniseki ngonqulo lwakhe; Ukongezelela, inkqubo yokungabaza inokubangela ukungathandabuzeki okungazange kwenzeke ngaphambili.
Kufuneka uqwalasele ngenyameko nje into enokungabaza ngayo kunye nokuba kutheni unayo. Emva koko, kuya kufuneka uthathe ixesha lokufunda imiba kwaye ufumane ingcinga engcono yimiba yintoni ingxaki. Ngokuzifunda, unako ukufikelela kwisigqibo malunga nento enokwenene yokukholelwa.
Mhlawumbi kukho iimpendulo ezintle zokungabaza kwakho; ngenxa yoko, ukholo lwakho luya kuqina kwaye lube nesiseko esingcono. Ngakolunye uhlangothi, mhlawumbi awuyi kufumana iimpendulo ezilungileyo kwaye uza kujongana nokukhetha: ukuqhubeka nenkolo owaziyo ukuba ayikho ingqiqo, okanye ukuyeka loo nkolo ngenxa yeenkolelo ezinengqiqo. Abanye abantu bahamba kunye nabokuqala kwaye bayibiza ngokuthi "ukholo" - kodwa ngenxa yezizathu ezithile, ukholo olunjalo lubhekwa njengelungileyo kwiimeko zonqulo.
Ukuthotyelwa kweenkolelo eziyaziwayo ngokungenangqiqo okanye ukungaqondakali ngokuqhelekileyo kukhangela phantsi xa kuziwa kwezopolitiko okanye kuthengwa ngabathengi. Ngubani odunyiswayo ngokuthi, "Ndiyazi ukuba uMongameli uS Smith akakwazi ukuthethelela imigaqo yakhe kwaye ndiyazi ukuba iqela lakhe alikwazi ukuchazela izinto ezininzi zokuphikisana kwangaphakathi baqhubeka bethetha abantu ukuba bakholwe, kodwa ndinokholo lokuba bayiphendule kwiingxaki zethu"?
Ngaloo ndlela, ukuba awukwazi ukufumana iimpendulo ezifanelekileyo kwimibandela yakho kunye nokungabaza, mhlawumbi uya kufumana ukuba ixesha lokufumana indlela eyahlukileyo ebomini. Kungenzeka ukuba ayikho into ekhoyo kwaye ingaba yinto ehlukeneyo yonqulo, kodwa kufanele kube yinto enye ejongene nobomi ngendlela efanelekileyo nengqiqo. Akufanele ube neentloni malunga nelokuba uzama ukwenza indlela yakho ngendlela eqondakalayo kuwe; awunyanzelekile ukuba ufumane inkolo efanayo njengentsapho yakho ngenxa yokuba wenze oko ngaphambili.
Meyer v. Nebraska (1923): UMgaqo-nkqubo weSikolo weZikolo ezizimeleyo
Indlela yokuHlola kunye neCriitique Arguments Arguments
Ngaba ukukholelwa kuThixo ku-Ism, Inkolo, ifilosofi, iNgcamango okanye iNkqubo yokuThunywa
I-Concept yeSayithi kunye neNgingqi kwi-Geography yase-Urban
Indlela yokudibanisa "Discouvrir" (Ukufumanisa, Ukutyhila)
Ziziphefumula Njani Inambuzane?
I-Amphoteric Oxide Inkcazo kunye nemizekelo
Biography kaFilipu Webb
Ukuqonda iNombolo yeMaphu kwi-Slalom Waterskiing ye-Slalom
I-RADAR ne-Doppler RADAR: Invention kunye neMbali
Iyintoni iClubs Club?
I-Biographie kunye neProfayili yokuNqanda